Ahenao ny fanjifana CPU an'ny Tumblerd ao amin'ny Xubuntu 12.10 | Avy amin'ny Linux
Ahenao ny fanjifana CPU an'ny Tumblerd ao amin'ny Xubuntu 12.10
RafaGCG | | GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Hitako izany Tumblerd Nihinana fizarana CPU 2 aho. Tumblerd no ampiasainy Xfce hanehoana ny sary sy ny sary kely thumbnails, ary rehefa manomboka mamorona azy ireo, indrindra amin'ny kapila lehibe dia mandany kely.
Ahoana ny fanitsiana an'io?
Tokony hovonoina ny topi-maso.
Ary miverina amin'ny ara-dalàna ny zava-drehetra aorian'ny famerenana amin'ny laoniny.
Na dia izao aza rehefa mijery ny lahatahiry dia tsy hiseho ireo sary kely misy ny atiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahenao ny fanjifana CPU an'ny Tumblerd ao amin'ny Xubuntu 12.10
Mety ho zavatra Xubuntu io ... nanana kofehy 2 sisa aho tamin'ny 100% foana.
Ary raha manao google ianao dia niseho tamin'ny mpampiasa maro kokoa. Toa tsy manandrana manidy ny folder ilay izy.
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra.
Eny, tsy nanome olana tamiko mihitsy izany. Ny hany fotoana manosika ahy dia raha misintona horonantsary aho (amin'ny alàlan'ny torrent na inona na inona) ary mijanona eo amin'ilay fampirimana anaovana azy aho. Ary lozika ny fandoroana azy satria ny daemon dia manandrana manavao ny fomba fijery isaky ny fanovana ny rakitra video. Ny vahaolana: akatona ny lahatahiry!
Fa aza ajanona mihitsy ny maody fanaovana topy maso. Io fomba io dia tsy hoe mampihena ny fanjifana fa tsy mampiasa ilay fitaovana mihitsy.
Toy ny miteny hoe "Ahoana ny fomba hampihenana ny fanjifana KDE" ary ny valiny "Aza apetraka ny KDE"
PS: nasiako "KDE" hametrahana na inona na inona.
Koa satria olona tsara aho dia holazaiko aminao ny fomba AZONAO ferana ny fanjifana zavatra iray:
Ary avy eo ianao dia mitantana ny programa. Ampiasaiko amin'ny pidgin izany satria hihena tampoka ny fanjifako indraindray tsy misy antony. Ity ny fisie pidgin.sh
Manokana 20% fampiasa CPU farafaharatsiny ho an'ny pidgin izany, avy eo dia mihodina ary mamono ny limiter rehefa vita. Tsy mbola nanandrana azy tamin'ny daemon aho, saingy tsy hitako ny antony tsy niasa.
Tokony ho nivoaka
cpulimit -e ZAVATRA MISY -l ZAVATRA MISY &
saingy nampiasa___ge_e__que_de_fafa aho ary nofafako rehefa nalefako.
torohevitra tena mahaliana Giskard, heveriko fa tokony hiara-miasa amin'ny daemon izany raha apetrakao ao amin'ny .xinitrc marina izany?
Eny. Izany no eritreritro koa. Ny fametrahana azy any dia tokony hiasa amin'izay entana daemon rehetra any.
Eny ary, niverina tany amin'ny taona sivifolo ...
Miaraka amin'ny hevitra voalohany aho, tsy mampihena ny fihinanana ianao, mijanona tsy mampiasa fitaovana ianao, na izany na tsy izany dia tsy manome ahy olana izany, na tsy hitako izy ireo.
Raha ny tokony ho izy dia nangatahina hatrany i Thunar mba haneho ny sarin-tsary kely ary efa ananantsika izy io, MISAOTRA anao thunar, farafaharatsiny tena nilaiko izany, fa izao dia tsara raha tsy mitovy amin'ireo sary ireo ny sary kely momba ny sary. Hitako fa afaka mametraka emblemanta ianao saingy tsy drafitra ny hametahana marika amin'ny takelaka tsirairay.
ao amin'ny Mageia 2 Gnome-Shell dia mampiasa ffmpegthumbnailer aho fa tsy totem ary mamokatra haingana kokoa ireo topi-maso ireo horonan-tsary.
Raha mijery ny fisamborana voalohany ianao dia hahita ny fizotrany mora foana.
Tsy haiko raha olana amin'ny ora fiasan'ny masinina. Ireo dingana mitovy amin'izany dia niraikitra nandritra ny andro maro ary zavatra voafaritra tsara izany. Na zavatra manokana amin'ny Xubuntu, angamba tokony ho nanamarina bebe kokoa aho alohan'ny nandefasana.
Mikasika izay voalaza ao anaty lahatsoratra. Gaga be aho fa ny lahatsoratra sy ny dikan'ilay lahatsoratra dia novaina be, tamin'ny fanontana alohan'ny antonony. Tsy hiteny aho na inona na inona, fa avy eo dia nieritreritra aho fa manan-jo hahafantatra ihany koa ny mpamaky. Saingy tsy hitako izay ilana hiresahana an'izany, tsy mila korontana, polemika na fanazavana. Aleo aza tsy miresaka momba izany azafady. Tsy tezitra na tezitra mihitsy aho. Fa azo antoka fa tsy hamoaka bebe kokoa aho, io no tena azo ampiharina indrindra, tsy zava-doza izany ho fari-piainako. Tsy manadino n'inona n'inona ianao. Ary handany fotoana aho hamakiana sy handraisana anjara amin'ny fanehoan-kevitry ny hafa.
Hanohy handray anjara aho, haneho hevitra ary hankafy ity bilaogy tsara ity sy ny olony satria tsy nisy na inona na inona, anectoda tsotra io. Aza manome tady amin'ilay lohahevitra azafady.
[GIMP] Fampianarana hamoronana ny vokatra "Vintage"
Mozilla dia manafoana ny Firefox 64 Bits ho an'ny Windows